यदि तपाईं मेरो विचार चाहनुहुन्न भने, तपाईंले सोध्नु हुँदैन! | Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 28, 2008 Douglas Karr
म के गर्छु भन्ने बारे महान चीजहरूको एउटा यो हो कि यसले मलाई अन्य कम्पनीहरूसँग सम्पर्क राख्छ जुन मैले पहिले काम गरें वा यसका लागि। आज मैले एक बिट समाचार पाएँ जुन निराशाजनक थियो।
करीव एक महिना अघि मैले विस्तृत सर्वेक्षण भर्न केही घण्टा बिताए जुन मैले काम गरेको एक कम्पनीबाट मलाई पठाइएको थियो र अब एकीकृत गर्न र पुन: बेच्न काम गर्दैछु। म त्यहाँ थियो जब म मेरो हृदय कम्पनी मा ओतप्रोत र अझै पनि आफ्नो मानिसहरूलाई र उनीहरूको उत्पादन र सेवाहरू आज सम्म प्रेम। जहाँसम्म, हामीले कम्पनी छोडेका त्यहि कारणहरूले पप अप गर्न जारी राख्यो जुन हामीले प्लेटफर्म पुन: बेच्न काम गर्यौं - फुलेको ईन्टरफेस, सुविधाहरूको अभाव, उच्च लागत, इत्यादि।
मैले सर्वेक्षणलाई आमन्त्रित गर्न मेरो इनबक्समा झण्डा लगाई सर्वेक्षणलाई जवाफ दिन जब मैले समय समर्पण गर्न सक्छु। पछि त्यो रात र भोलिपल्ट बिहान, मैले सर्वेक्षणमा राम्रो उत्तर दिन दुई वा दुई घण्टा बिताए। खुला पाठ क्षेत्रको साथ, म सीधा थिएँ र मेरो आलोचनाहरूको पोइन्टमा थियो। सबै पछि, एक बिक्रेताको रूपमा, तिनीहरूको उत्पादनको सुधार भएको थियो my सबै भन्दा राम्रो चासो। मैले कुनै पञ्चहरू तानिन र मुख्य मुद्दामा मैले महसुस गरेको भन्दा धेरै अगाडि थियो। मैले कम्पनी छोडेको प्रतिभा पनि ल्याएँ - उनीहरूले धेरै राम्रो कर्मचारीहरू गुमाउने थिए।
यद्यपि सर्वेक्षण अज्ञात थियो, मलाई थाहा थियो कि त्यहाँ पेश गर्ने प्रक्रियामा ट्र्याकि identif परिचयकर्ताहरू थिए र मेरो स्पष्ट टिप्पणीहरू कम्पनीले सजिलैसँग मेरो पहिचान गर्न सक्दछ। म कुनै प्रतिक्रियाहरूका बारे चिन्तित थिएनु, उनीहरूले मेरो राय सोधेका थिए र म त्यसलाई प्रस्ताव गर्न चाहान्छु।
आज अpe्गुरको बोट मार्फत (त्यहाँ छ सधैं एक अpe्गुर), मैले मेरो टिप्पणी कम्पनी मार्फत प्रतिबिम्बित भएको पाए र संक्षेप मा, मलाई कुनै पनि सम्बन्ध अगाडि कम्पनी संग काम गर्न स्वागत थिएन।
परिणाम, मेरो विचारमा, छोटो दृष्टि र अपरिपक्व छ। कसैले पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क नगरेकोले व्यावसायिकताको पनि अभाव देखाउँदैन। धन्यबाद मेरो लागि, त्यहाँ बजारमा धेरै बढी सेवा प्रदायकहरू छन् जुन मलाई केहि कम पैसा र एकीकृत गर्न सजिलोको लागि चाहिने चीजहरू आपूर्ति गर्न सक्दछ। मँ मेरो पुरानो कम्पनीलाई केहि नयाँ, ईमान्दार प्रतिक्रिया प्रदान गरेर मद्दत गर्ने आशा गर्दै थिएँ।
यदि उनीहरू मेरो राय चाहँदैनन्, म आशा गर्दछु कि उनीहरूले कहिल्यै नसोधेका छन्। यसले मेरो केही घण्टाको समय बचाउँथ्यो र कसैको भावनामा चोट पुर्‍याउने थिएन। कुनै चिन्ता छैन, यद्यपि। उनीहरूले ईच्छा गरे अनुसार म उनीहरूसँग कुनै सम्बन्ध गर्न सक्दिन।
टैग: gettinderboxप्रस्तावप्रस्ताव व्यवस्थापनबेन्चमार्क खोज्नुहोस्
यहाँ सोच्न लायक एउटा कुरा के तपाईंले सुनेको समाचार आधिकारिक हो वा अफवाह मात्र हो। अफिसहरू अफवाह फैलाउने डरलाग्दो ठाउँहरू हुन्, यो एकदम सम्भव छ कि तपाईंको सबमिशनको समीक्षा गर्ने मानिसहरूले भर्खरै बाहिर निस्केर केही कुराहरू भनेका छन् उनीहरूसँग हुनु हुँदैन, र नजिकैको कसैले तिनीहरूलाई सुने र यसलाई आधिकारिक नीतिको रूपमा लिए। अफवाह त्यसपछि विकृत भयो र धेरै नराम्रो कुरा सुन्ने साधारण मामलाबाट परिवर्तन भयो।
निस्सन्देह यो केवल अनुमान मात्र हो 🙂 यो पनि सम्भव छ कि तपाईले कुरा गरिरहनु भएको जुनसुकै कम्पनीबाट तपाईलाई अलग गरिएको छ।
तर मलाई लाग्छ कि यो बिन्दुमा मैले आफैलाई सोध्ने प्रश्न हो - के म ख्याल गर्छु? यदि तपाइँसँग यस कम्पनी प्रति पीडादायी भावनाहरू छन् (जुन तपाइँ तपाइँको पोस्ट मा जस्तो लाग्छ), त्यसपछि के तपाइँ साँच्चै तिनीहरूसँग काम गरिरहन चाहनुहुन्छ?
महान प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद, ईसाई। यो अफवाह वा तथ्य हो भन्ने बारे मलाई कुनै शंका भएको भए मैले पक्कै पनि पोस्ट गर्ने थिइनँ। यो, साँच्चै, एक तथ्य हो।
कुनै पनि कम्पनीको लागि पाठ यो हो कि, यदि तपाईं धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्न भने, यसलाई सोध्ने सर्वेक्षण पठाउनुहोस्!
तपाईंले के पाठ सिक्नुभयो?
रस, त्यो सबै भन्दा राम्रो टिप्पणी हुन सक्छ। मलाई लाग्छ कि मैले के सिकेको छु कि धेरै कम्पनीहरूले केवल डलरप्रति निष्ठा राख्छन् र तिनीहरूका कर्मचारीहरू वा तिनीहरूका ग्राहकहरू होइनन्।
मसँग कम्पनीमा सेयर छैन र म तिनीहरूको ऋणी छैन, त्यसैले मैले यो व्यक्तिगत रूपमा लिनु हुँदैन। म यसलाई द्रुत रूपमा प्राप्त गर्नेछु र सुन्न चाहने कम्पनी फेला पार्नेछु।
अक्टूबर २०, २०१ at २:29० अपराह्न
मलाई लाग्छ कि वास्तविक समस्या यो हो कि कम्पनीले केहि सीधा अगाडि, कडा-हिट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने मूल्य बुझ्दैन। डगले भनेझैं, यदि तपाईलाई नराम्रोसँग राम्रो सुन्नमा रुचि छैन भने, त्यसपछि तपाईसँग इमानदार हुन सक्ने कसैलाई सोध्नुहोस्। यदि तपाईले खोज्नु भएको सबै राम्रो, सकारात्मक, न्यानो, फजी प्रतिक्रिया हो। त्यसोभए तपाईले प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुने ग्राहकहरू/ग्राहकहरूलाई हातले छान्नुहोस्, तिनीहरूलाई कल गर्नुहोस् र सोध्नुहोस् "तपाईंलाई हाम्रो बारेमा के मनपर्छ?" एउटा प्रश्न, यो हो, किनकि वास्तवमा यति मात्र हो जस्तो लाग्छ कि तपाई जे भए पनि सुन्नमा रुचि राख्नुहुन्छ।
यस तथ्यको बारेमा बिर्सनुहोस् कि तपाइँसँग एक ग्राहक हुन सक्छ जसले तपाइँ बेच्न प्रयास गरिरहनुभएको सेवाको बारेमा थोरै थाहा छ र यसको पूर्ण क्षमताहरू प्रयोग गर्नुको अर्थ के हो। तपाईंले बेवास्ता गरिरहनु भएको ग्राहक सबै ग्राहकहरूले सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू जान्नको लागि पर्याप्त बुद्धिमानी हुन सक्छ र तिनीहरू मध्ये 95% लाई तपाईंले आफ्नो सेवाको बारेमा के भन्नुभएको बाहेक अरू केही थाहा छैन किनभने।
यदि तपाईं आफूले पाएका कुराहरू सुधार गर्न वा यसलाई अझ राम्रो बनाउन चाहनुहुन्न भने, हाम्रो समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईंको जस्तै अन्य धेरै सेवाहरू छन् जसको सट्टा हामी वरपर "बाँदर" गर्न सक्छौं।
जतिसुकै नकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि कम्पनीले यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । तपाईंले तिनीहरूलाई ठ्याक्कै दिनुभयो जुन तिनीहरूले मागेका थिए तिनीहरूले यो पाउँदा खुसी हुनुपर्छ।
यदि उनीहरूलाई यो अनुचित लाग्छ भने, खराबलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र राम्रोमा काम गर्नुहोस्।
सबैमा एक बेनामी रायको लागि सोध्नु र त्यसपछि यसलाई तपाइँको विरुद्धमा राख्नु धेरै खराब व्यवहार हो।
म किन मेरो उत्पादन पुन: बेच्ने कसैलाई अलग गर्छु?
मलाई लाग्छ कि यसले ठूलो मुद्दा ल्याउँछ। कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा (आफूजस्तै) अत्यधिक सक्रिय भएका व्यक्तिहरूको बारेमा के भन्छन् भन्ने कुरामा होसियार हुन आवश्यक छ। उनीहरूले ब्लगरहरूलाई पत्रकारलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि तिनीहरूले तपाइँको विचार माग्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले यसलाई रचनात्मक आलोचनाको रूपमा प्रयोग गर्न वा यसलाई बेवास्ता गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले गर्न सक्ने सबैभन्दा नराम्रो कुरा यो तपाईंको ब्लगमा पोष्ट हुन दिनु हो कि उनीहरूले तपाईंलाई त्यस्तै व्यवहार गरे। यसले उनीहरूमा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दैन।
मलाई लाग्छ कि केहि हद सम्म सत्य हो, कोलिन। म पक्कै चाहन्न कि मानिसहरू मसँग व्यापार गर्न डराउँछन् घटनामा केहि नराम्रो हुन्छ र म यसको बारेमा ब्लग गर्न सक्छु। तपाईंले माथि ध्यान दिनुभएको रूपमा, म वास्तवमा यो को हो भनेर कहिल्यै उल्लेख गर्दिन र म त्यो कहिल्यै गर्दिन।
मेरा केही नजिकका साथीहरू व्यवसायका लागि काम गर्छन् र म तिनीहरूको व्यवसायलाई हानि पुर्‍याउने प्रयास कहिल्यै गर्दिनँ - तर सोध्दा म इमानदार रहनेछु।
अक्टोबर 30, 2008 बिहान 12:18 बजे
डग, यो भयो भनेर सुनेर म धेरै दुखी छु। म पक्कै पनि तपाईंको प्रतिक्रियाको कदर गर्छु। यो के लायक छ को लागी - तपाइँको टिप्पणीहरु मा फरक छ र ती सराहना गरिन्छ।
उही सत्य हो जब कसैले कुनै प्रश्न सोध्छ, जस्तै "इन्डी र बीचको भिन्नता के छ। । । । "एक वास्तविक प्रश्न मलाई हालै सोधिएको थियो। मैले जवाफ बेवास्ता गरें किनभने मलाई थाहा थियो कि यो प्रश्नकर्तालाई अपमानजनक हुन सक्छ। यद्यपि, जब यो दोस्रो पटक सोधिएको थियो, मैले जवाफ दिएँ र पर्याप्त पक्का। । । सोध्नेले यसलाई "अपमानजनक" पाए। यद्यपि जवाफ बिल्कुल वास्तविक थियो।
यदि हामी जवाफ सुन्न चाहँदैनौं - कुनै पनि प्रश्नको - त्यसपछि पहिलो स्थानमा सोध्नुहोस्।